Fatima Nabil gabadhii ugu horeysay oo xijaaban oo war ka akhrisa Tv-ga Masar – SBC
Fatima Nabil gabadhii ugu horeysay oo xijaaban oo war ka akhrisa Tv-ga Masar
Posted by editor on Diseenbar 29, 2012 Comments
Fatima Nabil oo ah gabar wariye ah oo u dhalatey wadanka Masar ayaa noqotey haweenaydii ugu horeysay ee war ka akhrisa Taariikhda Telefishinka qaranka wadanka Masar iyadoo xijaab madaxa u saaran yahay, taasi oo qayb ka ah isbadalka wanaagsan ee ka dhacay wadankaasi tan iyo markii xukunka laga tuurey xukuumadii uu horseedka ka ahaa Mohamed Husni Mubaarak iyo kuwii ka horeeyey oo guud ahaan mamnuucay in habalaha warka ka akhriyaha Telefishinka qaranka aanay madaxa asturan karin.
Fatima waxay ka mid noqonaysaa sadex hablood oo war akhriye ka ah Chanel-ka koowaad ee Nile News Tv oo ah Telefishinka qaranka Masar, kuwaasi oo madaxoodu asturan yahay, waxayna arintan ka dambeysya ka gadaal markii wasiirka cusub ee warfaafinta Masar Salah Abdel-Maksoud uu baabi’yey go’aan ay horey u dajisay xukuumadii Husni Mubaarak oo u diidayey hablaha wararka Tv-ga ka akhriya aanay xiran karin Xijaabka.
Fatima Nabil ayaa warka ku saabsan qaadashada xijaabkeeda waxay ku shaacisay bogeeda twitter-a iyadoo ku qortey “Ugu dambey kacaanku wuxuu soo gaaray Maspero [Dhsimaha Tv-ga Qaranka Masar], go’aankan ma ahan helitaan laakiin waa sharci rasmi ah “.
Haweenka wadanka Masar 70% ayaa xjiaab madaxa ku asturta, iyadoo xukuumadan cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Mohamed Morsi ay tahay xukuumad u janjeerta dhanka Shareecada Islaamka, halkii xukuumadii ka horeysay ee Mubarak ay aheyd mid ka soo horjeeday arinmaha diinta inay ka muuqdaan warbaahinta dawlada, waxayna muujinaysay inay tahay xukuumad Cilmaani ah.
Tv-ga qaranka Masar ayaa ah Tv-ga dawladeed ee ugu da’da weyn bariga dhexe waxaana la aasaasay sanadkii 1960-kii, iyadoo horaantii sagaashameeyadii haweenay wariye aheyd oo lagu magacaabi jirey Kariman Hamza ay isaga tagtey shaqadii Tv-ga, ka dib markii loo diidey inay qamaar xirato xiliyada ay Tv-ga ka hadlayso, haweenaydaasi oo dacwad ku soo oogtey wasiirkii warfaafinta ee xiligaasi Safwat al-Sherif.
Diseenbar 29, 2012 at 9:18 am
maashaa Allaah wallaahi markaan arkay gabadhaab aad baan ugu farxay maashaa Allaah ilaahow diintaada ugar gaar
yusuf mohamed bososo says:
Janaayo 5, 2013 at 4:34 pm
asc dhamaan muslimiinta aduunka runtii waa wax lagu farxo waan soo dhaweynayaa xukuumada cusub ee masar siiba waxaan u mahad naqayaa wasiirka warfaafinta masar oo ogalaadey in hablaha war akhriyaha ah ay qaataan xijaabta maan sha alaah yusuf bososo